फर्नीचर - Decoora | सजाउनुहोस्
को फर्नीचर ती हाम्रो दैनिक जीवन को एक धेरै महत्त्वपूर्ण हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्दछ। को मोबिलियो यो वस्तुहरूको मिलेर बनेको छ जसको उद्देश्य मानव को उपयोग र गतिविधिहरूको सहजीकरण गर्नु हो। हामी सुत्ने बेला सम्म हामी उठ्न देखि तिनीहरू उपस्थित छन्। तसर्थ, यो महत्त्वपूर्ण छ कि सबै प्रकारका फर्निचरहरू छन् जुन हामीलाई थाहा छ, हामीलाई कुन चाहिन्छ, कुन चाहिँ मनपर्दछ र हामी कसरी यी भित्र फ्रेम गर्न सक्छौं भनेर जान्नु महत्त्वपूर्ण छ। सजावट हाम्रो घर वा हाम्रो कार्यालय बाट। यहाँ हामी भर्खरको पत्ता लगाउनेछौं प्रवृत्त यस क्षेत्र मा।
एक ओछ्यान चंदवा कसरी बनाउने
के तपाई आफ्नो बेडरूममा रोमान्टिक टच दिन चाहनुहुन्छ? साना बच्चाहरूको ओछ्यानलाई भित्रको निजी शरणस्थानमा बदल्नुहोस् ...
झिलमिलाहट सोफा कसरी ठीक गर्ने
द्वारा मारिया vazquez बनाउँछ2महिना .
के तपाईको सोफा ढल्किरहेको छ? समय बित्दै जाँदा, सबै सोफाहरू डुब्छन्, या त तिनीहरूको उपयोगी जीवनको कारणले...
भोजन कुर्सीहरू: तिनीहरूलाई कसरी छनौट गर्ने र तिनीहरूलाई सहज बनाउन सुझावहरू
द्वारा सजाउनुहोस् बनाउँछ2महिना .
भोजन कुर्सीहरू सबै देशहरूमा एक साझा वस्तु हो। संयुक्त राज्य अमेरिका वा cadeiras मा भोजन कुर्सी को रूप मा जानिन्छ ...
२०२२ को लागि सोफाहरूमा प्रचलनहरू
द्वारा मारिया जोस रोल्डन बनाउँछ6महिना .
कुनै पनि घरको बैठक कोठामा, सोफा मुख्य तत्वहरू मध्ये एक हो जब यो प्राप्त गर्ने कुरा आउँछ ...
काठबाट मोम रंगका दागहरू सफा गर्दै
द्वारा मारिया vazquez बनाउँछ6महिना .
यदि तपाईंको घरमा तीन, चार र पाँच वर्षका बच्चाहरू छन् भने, जीवन शक्ति र हाँसोको ग्यारेन्टी गरिन्छ। तर…
कसरी हेरचाह र काठ को फर्नीचर सफा गर्न को लागी
द्वारा मारिया vazquez बनाउँछ 10 महिना .
काठ हाम्रो घर मा एक महान भूमिका छ। यो को निर्माण मा सबैभन्दा लोकप्रिय सामाग्री मध्ये एक हो ...
भित्र निर्मित वार्डरोब को भित्री कन्फिगर गर्न कुञ्जीहरु
द्वारा मारिया vazquez बनाउँछ 11 महिना .
बिल्ट-इन वार्डरोबले हामीलाई ठाउँको अधिकतम उपयोग गर्न अनुमति दिन्छ। एकीकृत रूपमा उनीहरु एक निश्चित ठाउँ मा एकीकृत छन्, उनीहरु एक सम्भव बनाउन ...
तपाईंको बस्ने कोठाको लागि Ikea--सीटर सोफेहरू पत्ता लगाउनुहोस्
द्वारा मारिया vazquez बनाउँछ 12 महिना .
के तपाईं बैठक कोठा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईंलाई आफ्नो पुरानो सोफा बदल्न आवश्यक छ? Ikea सूचीमा तपाईं सबैको सोफाहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ ...
Ikea ले ROG को साथ मिलमा खेल फर्नीचर चलाउँछ
द्वारा मारिया vazquez बनाउँछ 1 वर्ष .
IKEA लोकप्रिय ब्रान्ड रिपब्लिक गेमरहरूको सहयोगमा 'गेमि' 'फर्नीचरको पहिलो लाइन सुरू गर्दछ। संग्रह ...
द्वारा सुसी फोंटेला बनाउँछ 1 वर्ष .
टापुहरू खुला किचनको सार हो। तिनीहरूले एउटा बाधाको रूपमा, अन्तरिक्षको सामान्य डिजाइनमा योगदान गर्छन्।
Ikea बाट बिली शेल्फको साथ भण्डारण विचारहरू
भण्डारण घर खाली ठाउँको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। यदि हामीसँग यसलाई भण्डार गर्न राम्रो फर्नीचर छैन र ...
OSB बोर्डहरू: सुविधाहरू र प्रयोगहरू
Ikea तपाईंको घर को सजावट को लागी डेस्क
Ikea बाट कलक्स शेल्फ, फर्नीचरको एक धेरै बहुमुखी टुक्रा
फर्निचर चिपकने कागजको साथ सजाउनुहोस्
तपाईको कार्यक्षेत्र सज्जा गर्न एक आधुनिक सचिव
घरमा बहुफंक्शनल फर्निचरका फाइदाहरू
Ikea तह पलंग ठाउँ बचत
मूल एन्टिक ड्रेसरहरूको साथ घर सजाउनुहोस्
हल सजाउनको लागि प्रवेश फर्नीचर
बेडहरू जुन लुक्छ
ओछ्यान खुट्टा क्याबिनेट
फोल्डिंग डेस्कले तपाईंलाई ठाउँ बचत गर्दछ
प्यालेटहरू संग सेल्फहरू, घर सजाउन विचारहरू
विचार काठको हेडबोर्डको साथ ओछ्यानमा सजावट गर्न
ठाउँ बचत गर्न बिछ्याउने वा ओछ्यान बेच्ने
Ikea तखता तपाईंको घर सजावट र व्यवस्थित गर्न